July | 2021 | Radio Himilo
Ahmed Haaddi July 31, 2021
Himilo – Weeraryahanka Everton James Rodriguez ayaa qirtay inuusan hubin halka uu ka ciyaari doono kubbadiisa xilli ciyaareedka soo socda, laakiin xiddiga reer Colombia ayaa meesha ka saaray inuu ku laabanayo Real Madrid. Waxaa jiray soo jeedinno ah in 30 ...
Maqal- Raxiiqul Makhtuum – Casharka 21aad
Himilo — Nin KENYAN ah ayaa muddo 20 sano ah ay ku qaadatay inuu kaga baxo dugsiga hoose ayaa ugu dambeyntii ka qalin-jebiyay Jaamacadda. Isaga oo la hadlaya warfidiyeenka, Mathew Aol Nyamlori, oo ah 38 jir, ayaa shaaca ka qaaday ...
Maqal- Raxiiqul Makhtuum – Casharka 20aad
Ahmed Haaddi July 29, 2021
Ahmed Haaddi July 28, 2021
Himilo – Wax ka yar hal sano ayaa ka haray heshiiska laacibka Paul Pogba ee Old Trafford. Waxaa soo badanaya doodaha la xiriira inuu 28 jirkan ka bixi karo kooxda. United waxay dooneysaa inay heshiish cusub la gasho kubad sameeya ...
Maqal- Raxiiqul Makhtuum – Casharka 19aad
Himilo – Xabaalo qadiimi ah ayaa laga helay gobolka Cork oo dhacda galbeedka Ireland kadib markii la shaqaaleysiiyay ido loogu tala galay inay helaan xabaalo qadiimi ah. Soo helidda halka ay ku yaalaan quruubaraha qadiimiga ah uma fududa dalalka. Waa ...
Ahmed Haaddi July 27, 2021
Himilo – Dib u dhiska kooxda Tottenham ayaa sii socota, iyadoo daafaca Toby Alderweireld uu ku biiray kooxda reer Qatar ee Al-Duhail. Xiddiga reer Belguim ayaa laba sano uga haray heshiiskiisa laakiin waxa uu doonayay in uu ka tago xagaagan ...
Himilo — Ragga la nool Waraabaha waa koox duurka kasoo qafaasha Dhurwaayada si ay dadka ugu madadaaliyaan. Qashin-qub aanu dhab ugu noolaan Karin insaanka ayay ku ilaaliyaan noolahan miciyaleyda kamid ah. Gafuurxir loogu tala-galay in la iskaga ilaaliyo si gaadmo ...